Miyay Tahay Inaad Calaamadeysid Warbaahintaaga Wadaagga ah? | Martech Zone
Miyay Tahay Inaad Calaamadeysid Warbaahintaaga Wadaagga ah?
Talaado, July 22, 2014 Talaado, July 22, 2014 Douglas Karr
Waxaan la shaqeynaa shirkado badan oo tikniyoolajiyad suuq geyn ah si aan u horumarino qoto dheer iyo baaris ku saabsan infographics, waraaqo cad, fiidiyowyo iyo istiraatiijiyaddooda suuq geynta guud ahaan. Inta badan, waxaan marwalba isku daynaa inaan ka faa'iideysano xoogga summaddooda. Waxaa muhiim ah in codka iyo muuqaalada lala xiriiriyo shirkad ama alaabteeda ama adeegyadeeda waxyaabaha ay qaybinayaan.
Si fudud u dhig, astaantaada waa waxa rajadaadu ka fikirayso markay maqasho magacaaga astaanta ah. Waa wax kasta oo dadweynuhu u maleeyaan inay ka ogyihiin magacaaga la bixinayo - labadaba waa xaqiiqo (tusaale waxay ku timid sanduuqa robin-ukunta-buluug), iyo shucuur (tusaale. Waa jacayl). Magacaaga magacaaga ayaa si macquul ah u jira; dadku way arki karaan. Waa la hagaajiyay Laakiin sumaddaadu waxay ku jirtaa oo keliya maskaxda qof. Jerry McLaughlin, Waa maxay Summad, Sikastaba?
Mararka kale, waxaan ka tagnaa calaamadeynta warbaahintooda baahsan. Badanaa waa marka aan horumarinno shaxanka. Warbaahinta loo qaybiyey sida joornaalada iyo qoraalada wax lagu qoro waxay leeyihiin fursad aad u balaaran oo lagu wadaago dhamaan boggaga. Markay u muuqdaan inay yihiin hal xayaysiis weyn, in kastoo, waxay dhaawaceysaa fursadaha ah in waxyaabahaas la wadaago. Waxaad ubaahantahay inaad go'aamiso sida ay u xoogantahay calaamadeynta waxyaabaha aad qeybisay iyo hadii ay dhaawaceyso awooddeeda wadaag.
Tusaale ahaan, waxaan ka shaqeynay a taxane taxane ah oo loogu talagalay Liiska Angie. Liiska 'Angie's List' wuxuu leeyahay sumcad la yaab leh oo xoog leh oo ku taal shabakadda iyo ka baxsan adeegsiga astaantoodu waxay ahayd mid aan maskax lahayn. Dadku waxay u muuqdaan inay la wadaagaan waxyaabaha si fudud maxaa yeelay waa la aaminay oo la aqoonsan karaa. Fiiri a Hagaha Daryeelka Ilkaha iyo Xilli xilli ah Tilmaam xilliyeed oo ku saabsan Jaangooyooyinka iyo Daryeelka Cawska. Waxaan adeegsanay calaamadeynta liistada 'Angie's Listing', qaabeynta iyo astaanta inta lagu guda jiro mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta:
Waqtiyada kale, waxaan la shaqeynay shirkado aan si fiican loo aqoon oo aan lahayn sumad adag, sidaa darteed waxaan diiradda saareynaa sheekada ka dambeysa qeybta halkii ay ka ahaan laheyd calaamadeynta shirkadda si aan ula nimaadno macluumaad aad u xoog badan oo guuleystay, lana wadaagay, iyo u horseeday adeegsadaha bogga soo degitaanka halkaas oo ay diiradda saari karaan mawduuca maadada shirkadda. Xitaa waxaan u adeegsanay hal-ku-dhigga Halloween tan iyo markii macluumaadka loo yaqaan 'Halloween' lagu soo koobay Halloween!
Diiradeena dambe waxay ahayd in mawduuca la qaybiyo iyada oo aan summad xad dhaaf ah oo ka dhigi karta daabacayaasha khadka tooska ah inay ka labalabeeyaan la wadaagida macluumaadka. Wayna shaqeysay!
Hase yeeshe, waqtiyada kale, waxaan riixnay taxane taxane ah oo si xoogan loogu calaamadeeyay barta macaamilka laakiin aan si muuqata u xayeysiin astaanta. Waxaan dooneynay taxanaha 'infographic tax' inuu si awood ah ugu dhiso wershadohooda si aamusnaan ah si madbacaduhu ula wadaagaan warbaahinta oo aysan u aqoonsan inay si xoogan u calaamadeysan yihiin… waxay umuuqatay inay dhamaantood isku qaab sameysnaayeen. Iyada oo la adeegsanayo macluumaad kasta, qaybinta ayaa la ballaadhiyay. Nasiib darrose, macmiilku (si qalad ah) ayuu dib u magacabay markii uu naga tagay waxayna lumiyeen dhammaan xawaaradihii la dhisay sidaa darteed ma doonayo inaan tuso.
Istaraatiijiyaddan muddada-dheer, ujeedkeennu wuxuu ahaa in shirkaddan loo arko inay tahay isha khibradda warshadooda gudaheeda. Si kale haddii loo dhigo - waxaan u adeegsan jirnay faahfaahinta dhisaan astaantooda, in aan diiradda la saarin.
Sida aad u calaamadeysid warbaahintaada baahsan waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa awooddeeda wax wadaagga. Calaamadeynta adag ayaa damin karta daabacayaasha khadka tooska ah - iyadoo aan loo eegin xoogga fiidiyowga, sawir-qaadista ama warqadda cad. Waxaan maalin walba dul istaagnaa faahfaahinta ku saabsan warshadaha suuqgeynta - waxaana inta badan iska diidnaa tusaalooyinkaas halka ay asal ahaan ka tahay xayeysiin weyn. Daabacayaashu ma rabaan inay xayaysiiyaan adiga, waxay rabaan inay ka faa'iideystaan ​​warbaahinta weyn ee aad horumarisay si ay qiimo ugula yeeshaan dhagaystayaashooda. Noqo mid ula kac ah qotada dheer calaamadeynta aad isticmaaleyso markii aad horumarinaysid waxyaabahaaga.
Tags: brandinfographics calaamadeysanwarbaahinta loo qaybiyeyMacluumaadka SuuqgeyntaFiidiyowyada Suuqgeyntaaan summad lahayninfographics aan summad lahaynwarbaahinta la wadaagowhitepapers
Qorista: Ka hel Xiriirinta Ganacsiga Google